Google Maps dia nohavaozina tamin'ny fahatongavan'ilay 'Ora malaza' | Vaovao IPhone
Raha misy mampiavaka an'i Google dia satria loharanom-pahalalana saika tsy mety ritra izy io. Izany no mahatonga ny olona maro kokoa hampiasa serivisy natokana ho an'ny orinasa na dia afaka misafidy amin'ny hafa misy aza izy ireo, ary angamba izany no hitranga amin'ny rindranasa Maps sy ny an'ny Google manomboka izao. Ary io dia, na dia marina aza fa nihatsara be ny sari-tanin'i Apple tato ho ato, io dia fiasa tahaka ilay iray izay ampidirin'ny mpifaninana aminy amin'ny fifaninanana ankehitriny izay lasa misy fiovana.
Manomboka izao, ao amin'ny Fampiharana Google Maps ho an'ny iOS Azonao atao ny miditra amin'ny lahasa izay mety efa nampiasainao imbetsaka tao amin'ny kinova an-tranonkala, izay efa nisy nandritra ny fotoana kelikely, fa ity kosa dia naseho voalohany tao amin'ny dikanteniny ho an'ny finday Apple.
Amin'ny anarana mitovy amin'ilay efa nahazatra antsika ihany, 'Ora malaza' dia hampiseho amintsika fampahalalana mifandraika ny fidiran'ny olona amin'ny toerana iray natokana ho an'ny ora sy ny andro, hahafahantsika manomana tsara kokoa ny fitsidihantsika an'io orinasa io. Ho fanampin'izany, asa fanampiny - izay tsy misy amin'ny magazay rehetra-, dia afaka hampiseho amintsika ny firongatry ny mpanjifa amin'ny fotoana tena izy, izay ahafahantsika mahafantatra hoe inona marina ny zava-misy ankehitriny izay ho hitantsika raha mankany isika.
Ity fiasa ity dia tena hanampy ary ho tsikaritra indrindra rehefa mitsidika tanàna hafa isika na te hahafantatra bebe kokoa momba ny toerana iray izay tsy tsidihinay matetika, fisorohana olana noho ny mpanjifa be loatra amin'ny fotoana rehetra. Noho izany, na dia mitohy aza ny fampiharana Apple Maps dia tena mahazo aina matetika, ankoatry ny fanomezana antsika fidirana tsara kokoa amin'ny rafitra, dia toa mitongilana maharitra eo anilan'i Google ny fifandanjana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Ny lahasa 'Popular Hours' dia tonga amin'ny fampiharana Google Maps ho an'ny iOS
Ny fampiharana dia afaka manova ny kisary ao amin'ny iOS 10.3